Etu esi emepụta ihe dị mfe ma rụọ ọrụ ọkụ (Hotspot) na Linux? | Site na Linux
Etu esi emepụta ihe dị mfe ma rụọ ọrụ ọkụ (Hotspot) na Linux?
N'agbanyeghị ihe «Sistema Operativo» nwere ike arụnyere na ụfọdụ Kọmputa (desktọọpụ, mobile ma ọ bụ laptọọpụ)na eriri na njikọ ikuku, n'ezie na oge ụfọdụ onye ọrụ ya / onye nwe ya ga-achọ ịmepụta / hazie a «Punto de acceso caliente», ya bụ, a «Hotspot» banyere ya. Ya mere, na-uru nke na-ekere òkè gị Njikọ .ntanetị wired site na gị ikuku na netwọk interface na ngwaọrụ ndị ọzọ.
N'ọnọdụ ọ bụla, ma ya na «Windows, MacOS o Linux» i nwere ike ime a «Hotspot» site na Okwu Ntanetị Iwu (CLI), nke ahụ bụ, ọnụ ma ọ bụ njikwa. Otú ọ dị, na «Windows y MacOS» Enwere ọtụtụ ngwa ndị ọzọ na-enye gị ohere ịmepụta a «Hotspot» n'ụzọ dị mfe ma rụọ ọrụ site na Eserese eserese (GUI). Gbanye «Linux» ha adịghị ụba, mana ị nwere ike ịmepụta otu iji «Gestor de conexiones de red» banyere ha «Entorno de Escritorio».
Nke mbụ, ka anyị buru n’uche na a «Punto de acceso caliente o Hotspot» ọ bụ n'ụzọ bụ isi a mkpuchi ụzọ awa site a ngwaọrụ nke mere na e nwere a nkwukọrịta ikuku, na-enweghị eriri, ya bụ, site na Njikọ Wi-Fi, ka tumadi na-enye Njikọ Internetntanetị, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na ọrụ site na mpaghara mpaghara (LAN) o netwọk mba ma ọ bụ zuru ụwa ọnụ (MAN / WAN).
Na abuo, na usoro nwere ike ịdị iche iche dabere na nwoke «Entorno de Escritorio» (Gnone, Plasma, KDE, XFCE, Cinnamon, Nwunye, n'etiti ndị ọzọ) eji ya «Distro GNU/Linux».
Maka okwu nke isiokwu anyị, anyị ga-eji a «Laptop» na Intel i3 4 Core CPU na 6 GB nke Ram na «Distribución MilagrOS GNU/Linux 1.2» na «Entorno de Escritorio XFCE» na «Gestor de conexiones de red» nke otu, akpo «Miniaplicación Gestor de la red», nke na-ejikwa n'ezie Ntanetị Network jikwa ya Gnome.
1.1 Nzọụkwụ 1
1.2 Nzọụkwụ 2
1.3 Nzọụkwụ 3
1.4 Nzọụkwụ 4
Mepee «Gestor de conexiones de red» nke ya «Distribución GNU/Linux»:
Arịrịọ ka «Gestor de conexiones de red» na-agbakwunye otu ọhụrụ «conexiones de red» ka «Distribución GNU/Linux» eji:
Gwa ya «Gestor de conexiones de red» na ọhụrụ «conexiones de red» ga-nke ụdị «Inalámbrica»:
Dezie oke nke ọhụụ «conexiones de red»:
Na akpọ taabụ «Inalámbrica» nke windo ọhụrụ a a na-akpọ «Editando Conexión inalámbrica 1» A ga-ejupụta ubi ndị a na ndụmọdụ ndị a tụrụ aro:
Aha Njikọ: Hotspot (Ma ọ bụ nke ị họọrọ)
SSID: Hotspot (Ma ọ bụ nke ị họọrọ)
Ọnọdụ: Hotspot ma ọ bụ Ebe Nweta
Ngwaọrụ: Wlan0 (Ma ọ bụ nke dịnụ)
Na akpọ taabụ «Seguridad inalámbrica» A ga-ejupụta ubi ndị a na ndụmọdụ ndị a tụrụ aro:
Nchebe: WPA na WPA2 Onwe
Ntughari: Hotspot * 2019 (Ma ọ bụ nke ị họọrọ)
Na akpọ taabụ «Ajustes de IPV4» A ga-ejupụta ubi ndị a na ndụmọdụ ndị a tụrụ aro:
Usoro: Ikesa ndi otu ndi ozo
Naanị ihe fọdụrụ bụ ịpị bọtịnụ a na-akpọ «Guardar» imecha nhazi ahụ wee gaa n'ihu ịnwale «Punto de Acceso» o «Hotspot». Cheta na mgbe kọmputa ebe m mepụtara «Hotspot» nwere otu nyeere, ọ gaghị egosi na-abata njikọ si «Wi-Fi» achọpụtara ma dị. Ozugbo ịkwụpụla ya, ị ga - ahụ «Redes inalámbricas», dị ka e gosiri n'okpuru:
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, buru n'uche na ọ bụ ezie na ị nwere ike ịbanyeworị na «Hotspot»nke a anaghị ekwe gị nkwa na ị ga-eme ya ịgagharị n’ .ntanet, ebe ọ bụ na nke a nwere ike ịdabere na ihe ndị ọzọ nke ụdị «Enrutamiento», n'ihi na ihe ndị ọzọ, ma ọ bụ na kọmputa na-ejikọrọ a «Módem», a «Módem/Router», «Router» o «Red local empresarial», na otu ụzọ njikọ ndị a si ejikwa njikọta niile nke netwọkụ.
Dị ka ị hụworo, mepụta ihe dị mfe ma rụọ ọrụ «Hotspot» iji ala «Gestor de conexiones de red» nke ya «Distribución GNU/Linux» Ọ bụghị ihe na-achọ ọtụtụ ma ọ bụ elu oru ihe ọmụma. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ihe ngwa ngwa mpụga, anyị na-akpọ gị ka ị mara «Wicd» y «WiFi Hostapd AP». Nke ikpeazụ nwere ebe nchekwa gọọmentị ya LaunchPad. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-agbalị ọzọ usoro anyị na-ahapụ gị nke a ukara njikọ na isiokwu nke website nke DEBIAN GNU / Linux.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Etu esi emepụta ihe dị mfe ma rụọ ọrụ ọkụ (Hotspot) na Linux?
Edemede mara mma .. na .. ABAWIFICANTV ?? Achọpụtara Venezuelan! XD
Ọ ga-adị mma ịkọwapụta na (ọ bụ ezie na ị kpọtụrụ ya aha, ana m ekwu n'ụzọ zuru ezu) eziokwu ahụ bụ na nke a na-eme ka antenna Wi-Fi gị rụọ ọrụ dị ka mgbasa ozi Wi-Fi maka igwe ndị ọzọ .. ikekwe jiri obere ihe osise ..
Ezi ntinye. Ọ ga-adị mma ma kọwaa otu usoro ahụ site na njikwa iwu, nke na njedebe na-akụzi ihe, ma ọ dịkarịa ala site n'echiche m.
Zaghachi na davidochobits
Ọ bara ezigbo uru. Anọ m na-achọ ụzọ iji belata bandwidth Skype na mobile. N'ụzọ nke a, m na-amachi bandwit na-aga site na ịnweta uche site na kọmputa.
Ekele, Aprilio! Obi dị m ụtọ na ọ baara gị uru.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka ichetara m usoro iji soro iji mepụta isi ihe, bụ na m na-echefu hehe
Zaghachi hector zamudio
PayPal, Visa, MasterCard nwere ike ịtụleghachi ego ego Facebook, Libra